Fokontany Ambohitsoa Mbola betsaka ireo fianakaviana sahirana
Fanisana ankapobeny ny mponina sy ny toeram-ponenana Misy ny tombony amin’ny fampandrosoana
Omaly alakamisy 24 mey no nampahafantarina tetsy amin’ny minisiteran’ny toekarena sy ny tetipivoarana ny fanombohana amin’ny fomba ofisialy ny fanisana ankapobeny fahatelo ny mponina sy ny toeram-ponenana (RGPH3) manerana an’i Madagasikara.
Sisin-dranomasina Atsimo Andrefana Aripaky ny Sinoa ny hazan-dranomasina
Sahiran-tsaina ary velon-taraina ireo mpanjono madinika any amin’ny Faritra Atsimo Andrefan’ny nosy,
Hetsika faran`ny herinandro
Manan-danja eran`izao tontolo izao efa hatramin`ny ela ny fankalazana ny fetin`ny reny ka rariny loatra raha mitobaka ny hetsika etsy sy eroa
Loza mahatsiravina teny Tsiazotafo Olona 4 maty tototry ny tany
Olona 4 no indray maty tetsy Tsiazotafo ampitan’ny tranomabrotra Venic omaly tolakandro vokatry ny firodanan’ny trano iray an-dalam-pananganana.
Depioten’ny fanovana “Rajao no ho tsarain’ny HCJ voalohany !”
Malaza indray ankehitriny fa hovonjivonjena ny fananganana ny Fitsarana ambony na ny HCJ (Haute Cour de Justice), rafi-pitsarana afaka mitsara ny filoha, izay tokony ho natsangana herintaona taorian’ny fianianany.
Banky foiben’i Madagasikara Mitokona ny mpiasa, mikatona ny “caisse” rehetra
Niroso amin’ny fitokonana nanomboka omaly alarobia ny mpiasan’ny banky foiben’i Madagasikara (BCM). Efa ela loatra ny fitakianay kanefa tsy noraharahiana izahay, hoy ny solontenan’izy ireo raha nanontaniana.
Vondron’ny mpiasan’ny JIRAMA “Efa mandeha ny famarotana tsikelikely ny orinasa”
Omaly no nanao fanambarana tetsy amin’ny hotely Ny Railovy tetsy Andohanan’Analakely ireo vondron’ny mpiasan’ny JIRAMA.
Mbola betsaka ireo fianakaviana tena sahirana ao amin�ny fokontany Ambohitsoa, Boriborintany faharoa.
Manodidina ny 600 ireo tena voasokajy ho marefo, hoy ny sefom-pokontany, antony tsy maintsy hanaovan’izy ireo hetsika fanampiana isaky ny faran’ny taona na taona vaovao tahaka izao. Ho an’ny vehivavy manokana dia miisa 6.235 izy ireo no miaina sy mivelona eo anivon’ny fokontany ka ny 35 %-n’izy ireo dia mpanasa lamba avokoa. Mba ho fanampiana azy ireo amin’ny famelomana ny ankohonany dia tonga nanolotra fitaovana maro samihafa ho azy ireo toy ny koveta sy ny sceau omaly ny Tanora HVM, lanonana notanterahina teo amin’ny toeram-panasan-damba. Nambaran-dRazafimandimby Rija, sekretera jeneralin’ny fikambanana fa miainga avy amin’ny isan-tokantrano ny fampandrosoana ny firenena ka tsy azo jerem-potsiny izy ireny fa tsy maintsy tohanana. Asa masina ny asa fanasan-damba satria misehatra ao anatin’ny fahadiovana ary mampita izany amin’ireo menaky ny ainy. Mbola hitohy any amin’ny Boriborintany fahadimy ny hetsika amin’ny herinandro ho avy io.